SLT SPORTS:Isbarbardhiga Xiddigihii El Clasico: Yaa Badiyay, Yaase Guuldareystay? CR7 v Messi, Benzema v Suarez, Marcelo v Alves. | Somaliland Today
← SLT SPORTS: Van Persie Oo Guuldarro Ka Badbaadiyay Kooxdiisa Manchster United.
“99% Dadka Aan Cashuurta Bixin Waa Dadka Lacagta Leh” Maayar ku Xigeenka Hargeysa →
SLT SPORTS:Isbarbardhiga Xiddigihii El Clasico: Yaa Badiyay, Yaase Guuldareystay? CR7 v Messi, Benzema v Suarez, Marcelo v Alves.
(SLT-Madrid)-Kulankii shalayto ee Bernabeu ee Clasico waxa uu soo saaray iska horimaadyo fiican oo lagu riyaaqay iyadoo Real Madrid ay 3-1 kaga badisay Barcelona.
Sidee ayay u ciyaareen xiddigaha muhimka u ahaa labada kooxood? Waxaan fiirineynaa isbarbardhiga xiddigaha waa weyn ee labada kooxood iyo cidii badisay.
Labada xiddig ee dunida ugu waa weyn ayaa ku jira qaab ciyaareed wanaagsan iyagoo shalayto cerysanayay inay jabiyaan rikooro u yaala La Liga.
Laakiin midkoodna shalayto ma noqonin xiddigaha ugu muhiimsan ee ciyaarta iyadoo diirada ay ka xadeen xiddigaha kale ee Real Madrid iyo Neymar.
Waxa ay ahaan laheyd wax ka duwan sida ay haatan tahay haddii Messi oo u baahnaa gool uu ku barbareeyo rikoorka gooldhalinta abid ee La Liga ee Telmo Zarra ee 251 gool uu dhalin lahaa kubadii uu u soo dhigay Suarez iyadoo taabashadiisa ay aheyd mid aan fiicneyn taasoo keentay in Casillas uu ka badbaadiyo. Haddii Messi uu fursadaas gool u bedeli lahaa xitaa natiijada ayay wax ka bedeli laheyd iyadoo Barca ay markaas hogaanka ku qaban laheyd 2-0.
Laakiin daqiiqado ka dib Real ayaa barbareysay iyadoo Ronaldo uu rigoore u saxiixay, Messi ayaana woodi waayay inuu ciyaarta u soo celiyo kooxdiisa iyadoo ay aamusiyeen daafacyada Pepe iyo Sergio Ramos.
Ronaldo ayaa isna mar walba ah xiddig hamigiisa yahay inuu dhaliyo goolal badan intii macquul ah, waxaana uu jeclaan lahaa haddii uu jabin lahaa rikoorka seddexleyda ugu badan ee La Liga oo ay haatan min 22 iskula hayaan Zarra iyo Alfredo di Stefano.
Laakiin ma uusan aheyn anaani ama mid naftiisa kaliya jecel, isagoo ka qeyb qaatay dhismaha goolkii seddexaad isagoo kubada u baasay James kaasoo u sii dhiibay Benzema halkii uu isku dayi lahaa inuu isagaba dhaliyo goolka.
Ma jirin rikooro ay dhigeen labada xiddig ee ugu fiican dunida, midkoodna guul geesinimo leh uma horseedin kooxahooda, ma jriin waqtiyo la xusuusto oo ay sameeyeen… laakiin waxaa jira kaliya hal guuleyste.
YAA BADIYAY: Ronaldo ayaa badiyay dagaalkii xalayto isagoo shabaqa soo taabtay rigoore-ba ha ahaato. Messi waxa uu ka shalaayi doonaa fursadii uu qasaariyay markii kooxdiisa ay 1-0 ku heysay hogaanka. RONALDO
Luis Suarez ma ku soo bilaaban doonaa ciyaarta ayay aheyd su’aashii uu tababare Luis Enrique ku tilmaamay inay u dhigan tahay hal milyan doolar laakiin Suarez waa uu ku soo bilowday.
In ka yar afar daqiiqo ayay ku qaadatay inuu saameyn ku yeesho ciyaarta isagoo ahaa caawiyaha goolkii uu Neymar hogaanka ugu dhiibay Barcelona, xitaa caawin kale ayuu heli lahaa markii uu karoos fiican u soo dhigay Messi oo aheyd inuu dhaliyo fursad sidaas oo kale ah.
Wixii intaas ka danbeeyay Suarez waa uu muuq beelay, waxaana bedelay sida qorshaha ahaa Pedro bartamihii qeybta labaad ee ciyaarta, balse waxa uu sameeyay howl uu ku soo bandhigay inuu leeyahay tayo aan la dafiri karin.
Si kastaba, habeenka waxaa iska lahaa No 9 kale ka dib qaab ciyaareed cajiib leh oo uu soo bandhigay Karim Benzema kaasoo xitaa ka helay jamaahiirta Madrid inay u sarre joogsadaan oo u sacbiyaan iyadoo la ogyahay inay si joogta ah ugu oorin jireen.
Awooda uu Benzema u lahaa inuu kubad fiican la ciyaaro khadka dhexe, dhaqdhaqaaqiisa qatar ahaa iyo sida uu boosas ugu abuurayay Ronaldo ayaa aheyd waxyaabaha ka muuqday ciyaarta.
Waxaana uu sidoo kale dhaliyay goolka seddexaad ee ciyaarta isagoo nasiibdarro ku lahaa in birta ay beenisay labo jeer oo isku xigta.
YAA BADIYAY: Benzema waxa uu u ciyaarayaa si ka fiican sidii hore, laakiin Luis Suarez sidaan ognahay goolal waa uu dhalin doonaa xilli dhow. BENZEMA.
Dagaalkaan u dhaxeeya xiddigaha South America waxa uu ahaa ku celiska kulankii Brazil iyo Colombia ee Koobkii Adduunka, laakiin wax walba waxa ay u jeedeen jihada xiddiga reer Brazil kaasoo hogaanka u dhiibay kooxdiisa daqiiqadii afaraad isagoo si raaxo leh u dhameystiray kubada.
Neymar ayaana marar badan isku dayayay inuu kubado taabasho fiican la ciyaaro Messi iyo Suarez laakiin ma aysan suurogelin inay natiijo keento madaama uusan hore u la ciyaarin Suarez.
Dhanka kale James Rodriguez oo si xun ku bilowday waqtigiisii Spain ayaa ka mid ahaa mashiinada Real Madrid xalayto isagoo kubada ka soo waday dhanka midig ee khadka dhexe, waxaana uu ahaa mid si joogta ah ugu lug leh ciyaarta isagoo caawiye ka ahaa goolkii seddexaad ee uu dhaliyay Benzema.
Rodriguez ayaa haatan soo bandhigaya inuu la qabsaday kooxdiisa cusub, waxaana uu qiil fiican u raadinayaa lacagtii qaaliga aheyd ee laga soo bixiyay ee 71 milyan ginni.
YAA BADIYAY: Gool fiican ayuu dhaliyay Neymar, laakiin Rodriguez isna caawin ayuu sameeyay. WAA AY ISKU GARAB DHACEEN.
Marcelo v Alves
Labada xiddig ee reer Brazil waxa ay ahaayeen kuwa isku qoslaya oo isgacan qaadaya ka hor ciyaarta laakiin markii ay ciyaarta bilaabatay waxaa jiray kaliya hal guuleyste.
Marcelo ayaa wacdarro ku dhigay garabka bidix ee Real Madrid isagoo ay si fiican isku fahmeen Isco waxaana uu dhibaato joogta ah ku ahaa daafaca Barcelona, isagoo xitaa ahaa sababtii keentay in Gerard Pique kubad gacan ah looga dhigo rigoore.
Alves ayaana dhibtooday markii uu kubada heystay iyo markii uu raacanayayba, laakiin howsha u tiilay Alves ayaa aheyd mid ka weyn tan Marcelo kaasoo ay is caawinayeen Isco, laakiin Alves waa looga kala tagay booskiisa isagoo aan caawin ka helin Messi ama Suarez kuwaasoo afka hore isku bedbelayay.
YAA BADIYAY: Marcelo ayaa si fiican uga soo muuqday saaxiibkiisa reer Brazil, tartan kale maba jiro. MARCELO
Tababaraha Real Madrid Carlo Ancelotti ayaa ah nin jecel isku dheelitirnaanta waxaana uu inta badan xooga saaraa koox guuleysaneysa halkii uu ka doorbidi lahaa shaqsiyaad guusha u soo hooya mar walba.
Ciyaarta ka hor waxa uu sheegay inuu hal ciyaaryahan si lama filaan ah ugu soo bilaabi doono ciyaarta, laakiin taasi ma aysan noqonin waxaana uu ku soo shirtagay 11kii laga filayay.
Dhanka kale Enrique ayaa mudan in lagu eedeeyo inuu dib ugu laabtay waayihii guulaha Barcelona isagoo soo xushay seddexda khadka dhexe ee Sergio Busquets, Xavi iyo Andres Iniesta xitaa ninkii uu bedelay Tata Martino ayaa ka quustay inuu seddexdaas hal mar kuwada ciyaaro dhamaadkii xilli ciyaareedkii hore.
Ivan Rakitic oo xagaagii yimid ayaa soo bandhigay awood iyo tamar badan oo looga baahan yahay khadka dhexe, waxaana uu ku bilowday xilli ciyaareedka si wanaagsan.
Inuu isaga keyd geliyo oo uu ku soo bilaabo Xavi waxa ay noqotay mid lagu guuldareystay, waxaana uu Enrique haatan ogaan doonaa in bishiisii malabka ee Barcelona ay dhamaatay,
Inuu Jeremy Mathieu ka ciyaarsiiyo daafac bidix iyo inuu ku soo bilaabo Luis Suarez ayaa iyada xitaa aheyd go’aano su’aalo laga keenay, laakiin halkii inta badan looga badiyay waa khadka dhexe.
Tan ugu danbeysana Enrique waxa uu u baahan yahay inuu saxo qaladaadka daafac ee kooxdiisa, mar kale gool ayaa looga dhaliyay kubad dhimatay oo aheyd kooner.
YAA BADIYAY: Ancelotti waxa uu ciyaaray taatiko toosan oo aheyd mid uu ku soo badiyay hadda ka hor; Enrique waxa uu qaatay qamaar aan muhim aheyn. ANCELOTTI.